काठमाडौं । पूँजीबजारको आकार र कारोबार बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखेर दिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) को वैशाखको तुलनामा चालू आवको वैशाखमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा वृद्धिदर ९९ दशमलव १९ प्रतिशतले बढेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरूमा गत आवको वैशाखसम्म ३७ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएकोमा गत वैशाखमा रू. ८१ अर्ब ६१ करोड २० लाख पुगेको छ ।
वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक देखिएको छ । ग्लोबलले यस शीर्षकको कर्जामा ७ अर्ब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल शेयरबजारप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । यही कारण शेयर धितोमा कर्जा बढेको हो तर बैंकको कुल कर्जामा यस्तो कर्जाको अंश सामान्य नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकको आकार ठूलो भएकाले यस्तो कर्जा धेरै देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा धेरै कम कर्जा यो शीर्षकमा गएको छ,’ उनले अभियानसँग भने । उनका अनुसार हाल बैंकले यस्तो खालको कर्जामा औसत साढे ८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
शेयर धितो कर्जामा दोस्रो धेरै लगानी गर्नेमा एनआईसी एशिया बैंक रहेको छ । यसले ५ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
यसले साढे ५ अर्बदेखि साढे ४ अर्बसम्मको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । साढे ४ अर्बभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्नेमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य र कुमारी बैंक रहेका छन् ।
यस्तो प्रकारको कर्जा प्रवाह कम गर्नेमा कृषि विकास बैंक देखिएको छ । कृषिले वैशाखसम्ममा यस्तो कर्जा रू. १० करोड ३७ लाख मात्र प्रवाह गरेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा चासो दिएको देखिँदैन । यस अवधिमा विकास बैंकहरूको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ४५ दशमलव ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको वैशाखमा रू. ६ अर्ब ९९ करोड हाराहारीमा प्रवाह भएको यस्तो कर्जा बढेर अहिले रू. १० अर्ब १८ करोड पुगेको छ । यस्तो कर्जा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले प्रवाह गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये पनि केही कम्पनीले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा समेटेका छैनन् । वैशाखसम्ममा रू. २ अर्ब ५४ करोड ८० लाख बराबरको मार्जिन प्रकृति कर्जामा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ग्राहकले सुरक्षणबापत राखिने शेयरको मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ उक्त रकमको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १२० कार्य दिनको मूल्यांकन गर्न पाइन्थ्यो ।
यसरी प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर पनि अघिल्ला वर्षको भन्दा कम छ । सस्तो ब्याजदर र शेयर धितो कर्जाको सीमा सहज भएकाले पनि लगानीकर्ताहरू यस्तो कर्जामा आकर्षित भएका हुन् । विगतमा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जामा १३–१४ प्रतिशतसम्म लिने गरेका थिए । अहिले शेयर धितो कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम साढे ६ प्रतिशतदेखि साढे ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।